Zvakaitika uye sarudzo ndizvo zvakavanzika zvepamhepo fashoni kubudirira | ECommerce nhau
Zvakaitika uye sarudzo ndizvo zvakavanzika zvepamhepo fashoni kubudirira
Imwe yei zvikamu mukutengeserana kwepamhepo iyo ine yakawanda mikana ndeye iyo online fashoni kutengeserana, Nekudaro, munda uyu unomiririrawo mamwe matambudziko, chikuru kuve kuenzanisa ruzivo rwekutenga pamhepo kune rwekuenda kuchitoro chaicho.
Chikamu chechinetso chinomiririrwa nenyaya yekuti vakadzi vagara vachiratidza chimwe chishuwo chekutenga, vachitarisa sarudzo dzakasiyana kuti vakwanise kusarudza iyo inoratidzwa. Nekudaro, chiitiko ichi chakaoma kuve nacho mune chitoro chepamhepo, uko vatengi vasingangobata chigadzirwa chete, asi havagone kuyedza shangu mbiri dzinoita sedzakanaka, kana bhegi iro rinowirirana neshangu dzavakapfeka.
Izvi zvinomiririra a nzvimbo yemukana yeindasitiri ye online fashoni, uye kunyangwe iri dambudziko rakapihwa kubvira kutanga kwa yekutengesa zvipfeko pamhepo kune nzira dzakasiyana idzo nyaya iri kubatwa nayo, uye izvo zvinogona kubatsira mamwe maindasitiri kuti akwanise kuvandudza zvinoitika zvevatengi vavo pavanotenga pamapuratifomu avo. Ngatione zvimwe zvacho.
Chinhu chekutanga icho vazhinji vevatori vechikamu muindasitiri iyi vakashanda chiri mu zvese zvirimo, Izvi zvinoreva kuti sarudzo dziripo mu online store ivo vanofanirwa kugutsa zvido zvevatengi. Semuenzaniso, kuve nemapfekero enguo kubva pamakona akasiyana, uye iwo mamodheru eakasiyana mavara uye toni dzeganda ndeaya anoratidza kuti hembe dzinotaridzika sei.
Nenzira idzi unogona kuzadzisa kuchengetedzwa kukuru kwevashandisi veduVanozoziva kuti ipuratifomu iyo kana vakatenga, vanozove nechokwadi chekuti mbatya dzinozokwana navo. Dzimwe nyaya dziri kushandisirwa iko kushandisa kwechokwadi chaiyo kana simulators umo chikuva chinogadzira mufananidzo unoteedzera chinowanikwa pane mushandisi nemufananidzo wemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Zvakaitika uye sarudzo ndizvo zvakavanzika zvepamhepo fashoni kubudirira
Shandisa zvisina kuzivikanwa musika niches